စစ်အစိုးရလက်ထက် ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုများ တိုင်ကြားနိုင် | ဧရာဝတီ
စစ်အစိုးရလက်ထက် ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုများ တိုင်ကြားနိုင်
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 21, 2013 | Hits:30,082
| | ရာထူးမှ အနားမယူမီ နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ဓာတ်ပုံ – AP)
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ အာဏာအလွဲသုံးစားမှုများ အပါအ၀င် မတရားမှုများကို တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ငြိမ်းက ပြောသည်။
နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာ ကော်မတီ ရုံးခန်း တွင် ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးအောင်ငြိမ်းက ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ မေးမြန်းချက်ကို အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာကော်မတီ အနေဖြင့် ယခင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အစိုးရက ကျူးလွန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ အာဏာ အလွဲသုံးစားပြုမှုများနှင့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ခံစားခဲ့ရသော ပြည်သူများက တိုင်ကြားလာပါက အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ ဦးအောင်ငြိမ်းက ကော်မတီအနေဖြင့် ယခင်အစိုးရ၊ ယခုအစိုးရ မခွဲခြားဘဲ ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာတိုင်းကို လက်ခံအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
“ယခင်အစိုးရလက်ထက်က အမှုတွေလည်း ကျနော်တို့ဆီတင်ပါတယ်။ တိုင်ပါတယ်။ တိုင်တဲ့အခါ ဥပဒေနဲ့အညီ ကော်မတီနဲ့ ညှိုနှိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဥက္ကဋ္ဌဆီ တင်တယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်က အမှုဖြစ်သော်လည်း ကျနော်တို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ပေးပို့လျက် ရှိပါတယ်” ဟု ဦးအောင်ငြိမ်းက ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ယခင်အစိုးရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရ၊ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာ သက်ရောက်မှု မရှိစေရ ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသော်လည်း အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာများနှင့် ရောထွေးပတ်သက်ခြင်းမရှိဟု ဦးအောင်ငြိမ်းက ဆိုသည်။
“အခုက ပြည်သူတဦးချင်း တိုင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမှု မရှိစေရဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ တိုင်ကြားစာတွေမှာ ယခင်အစိုးရလက်ထက်က တိုင်ကြားစာတွေ လည်းရပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုပဲ ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ပေးပို့လျက်ရှိပါတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန် မရှိစေရဘူးဆိုတာက တိုင်ကြားတဲ့အမှုတွေနဲ့ မရောထွေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးအောင်ငြိမ်းက ရှင်းပြပြီး လက်ခံရရှိသော ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် တိုင်ကြားချက်များမှာ မြေသိမ်းမှုများဟု ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း ၁၄ ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၄၄၅ မှာ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ယခင်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်မှု၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ပြန်တမ်း၊ ကြေညာချက်၊ ဆောင်ရွက်ချက်၊ တာဝန်တွေ၊ ရပိုင်ခွင့်များကို ဆက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ယခင်အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အကြောင်းပြု တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမရှိစေရဟု တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလည်းဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွှန့်ကမူ စစ်အစိုးရလက်ထက် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို အရေးယူရန်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ယခင်အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် တိကျစွာ ကာကွယ်ထားပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၅၅ မှာ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အမိန့်၊ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်မှု၊ ဥပဒေ၊ ကြေညာချက်တွေကို အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဆက်ခံတယ်။ ဟိုတုန်းက န၀တ၊ နယကအဖွဲ့ဝင်တဦး၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် အကြောင်းပြုလို့ တရားစွဲလို့ အရေးမယူရဆိုပြီး အခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်က အတိအလင်းပါတယ်။ အခု ပြောဆိုနေတာတွေက အဲဒီအခြေခံဥပဒေကို ကျော်သွားနိုင်သလား ဆိုတာက ပြောတဲ့သူကို လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ဒီပုဒ်မရှိနေတဲ့အတွက် အရင်အစိုးရရဲ့ ဥပဒေပြုကျင့်မှုတွေကို တိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတာက စကားအရာသာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ တကယ်လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး” ဟု ဦးသိန်းညွှန့်က ဆိုသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါက်တာစောနိုင်ကမူ ယခင်အစိုးရလက်ထက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ ဥပဒေမဲ့ပြုကျင့်မှုများကို အရေးယူနိုင်သည်ဆိုပါက လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပြသရန် လိုအပ်သည်ဟု ပြောသည်။
“တိုင်ကြားနိုင်တယ် ဆိုတာက အရေးယူမယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်တာ။ တိုင်လို့ရတယ်။ အရေးယူတာ မယူတာကတော့ သူမသိဘူးလို့ ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့။ တိုင်ရင် လက်ခံမယ်၊ အရေးယူတာမျိုး လုပ်မယ်လို့မှ အတိအကျ ပြောမသွားတာ။ ပြီးစလွယ် ဖြေသွားတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်” ဟု ဒေါက်တာစောနိုင်က ဆိုသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် လယ်သိမ်းမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က စစ်တပ်မှ သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေများ အနက် အသုံးပြုခြင်း မရှိသေးသည့် မြေယာများကို တောင်သူ လယ်သမားများသို့ ပြန်လည်ပေးအပ် သွားမည် ဟု ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောဆိုသွားခဲ့ကြောင်း သိရပြီး ယင်းကိစ္စအပေါ် သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က အတည်ပြုသော်လည်း သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေ များကို ပြန်ပေးအပ်နိုင်မည့် အချိန်ကို အတိအကျ မပြောနိုင်သေးကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ပြည်သူတို့၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာ ကော်မတီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးအောင်ငြိမ်းက ကော်မတီဖွဲ့စည်းချိန်မှ စတင်ပြီး ပြည်သူတို့၏ တိုင်စာပေါင်းများစွာရရှိထားပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရများထံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးပို့ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့တိုင်ကြားစာ ၁၆၇ စောင်ကို သက်ဆိုင်ရာထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး တိုင်စာ ၇၃ အပေါ်ကိုသာ သက်ဆိုင်ရာ စိစစ် အရေးယူ အကြောင်းပြန်လာကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့တိုင်ကြားစာ ၃၆၀ ကို သက်ဆိုင်ရာထံ လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ပြီး ယင်းတိုင်စာများအနက်မှ အမှု ၃၃ ခုကို ပြန်ကြားပြီး ၃၂၇ မှု အပေါ် အကြောင်းပြန်ကြားချက် မရရှိဟု ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု နည်းပါးရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားသည် ယခင် အစိုးရခေတ်ကဲ့သို့ပင် အမူအကျင့်များ ကျင့်သုံးနေမှုက အဓိက အချက်တချက်အဖြစ် သုံးသပ်တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အဆင့်ဆင်သေ့ာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူများ၊ ၀န်ကြီးဌာနများမှ ၀န်ထမ်းများသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လမ်းညွှန်ထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း၊ ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်းနေသော်လည်း ယင်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်၊ လုပ်ရပ်များ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ မပြောင်းလဲကြဘဲ ယခင်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရသည်ဟု ကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား စုံစမ်းမှုရလဒ် လာမည့် လွှတ်တော်တွင် တင်ပြမည်မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ အရေးပေါ်အခြေအနေ အတွက် လွှတ်တော်က ရက်ပေါင်း ၆၀ သတ်မှတ်အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်ရှင် ပြဿနာဖြေရှင်းရေး စက်မှုဇုန်များကို လွှတ်တော်က စစ်ဆေးမည်လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်က ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိသင့်သေးသည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် “ဝ” တောင်းဆိုမှု လွှတ်တော် တင်ပေးမည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
21 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ပေါ်တင် February 21, 2013 - 10:10 pm	တိုင်ချင်တယ်ဗျို့..ဦးသန်းရွှေနဲ့နောက်လိုက်များအားလုံးကို….!!!!!
ဗျာ…. ….. အဲဒါဆိုရင်တော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရပါလိမ့်မယ်..ဟုတ်လား????
Reply	mgoogyaw February 21, 2013 - 10:30 pm	So, how to believe their words? You can complain,but,they are not sure to take action means,how do we have to understand? If,they will take care,to returns back our,unfairly occupied the lands,we will put up our proposals,if not,just to spend the time is so ridiculous,and proof that,they are acting the same as Military Regime’s method. Where is our hopes,to get back our lands in Dawei,owned by our grand ancestors for nearly 100 years,the land with legally registered in1928?
Reply	mon-Kayin February 22, 2013 - 1:41 am	တိုင်ကြားစာများကိုလက်ခံပါသည်
မည်သည့်စာကိုမှအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမပြုပါ။ ဘယ်သူတွေတိုင်တာကို အဆင်
ပြေအောင်လုပ်ပေးနေလဲတော့မသိဘူး။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဘယ်တိုင်
Reply	The Losers. February 22, 2013 - 2:02 am	What do you means? Are’nt you accept the proposals ? If not,why the losers have to spend time and money and efforts for nothing.If,we can claim,we wants to claim back our lands in Dawei,which was owned by our grand ancestors for nearly 100 years. Those lands were intentionally and by forced took away from us.Our lands have registered since 1928,at Tavoy(now-Dawei) Court.This land is situated in front of Zaygyee and U Kyaw Yin’s corner.We need to claim back our land,which Khawata and Information Ministry,took from us for their sake.Khawata have mentioned to give back half portion to previous owner(us).We have claim several times starting from 1991 till now.Nothing strange.Why ,they took from us,without any reason,is it for their benefits?Due to new Government fair and square Laws,we want to claim our land back,because,they have took from us by means intentionally.
Reply	မြန်မာတိုင်းရင်းသူ February 22, 2013 - 3:09 am	‘၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ယခင်အစိုးရ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရ၊ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာ သက်ရောက်မှု မရှိစေရ ဟုပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိသော်လည်း’
အရင် အစိုးရက သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေမှာ သည်လို ထည့်ရေးထားကတည်းက သူတို့ ပြည်သူအပေါ်မှာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေကို မတရားလုပ်တာ၊ အနိုင်ကျင့် ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိတာ သူတို့ဘာသာ သိပြီးသား ဖြစ်ပုံ ရပါတယ်။ တိုင်စရာ ရှိတာ တိုင်ပါ။ အရေးယူမှု ကြန့်ကြာနေတာကို စိတ်မစောပါနဲ့။ အခုမှ တိုင်းပြည်က ပြောင်းကာစ တဖြေးဖြေးချင်း လာမှာပါ။ တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော်၊ ၂၀ ကျော်က အမှုတွေ အခုမှ ပြန် အပြစ်ပေးလို့ ကောင်းတုန်း။ (ကမ္ဘောဒီးယားတို့၊ ဆားဗီးယားတို့)။ လာမှာပါ။ သေသွားလဲ အလောင်းကို ပြန်တူးပြီး နောင်ဘ၀တွေမှာ ဆက် အပြစ်ဒဏ်ခံဘို့ အမိန့်ပြန်ပေးမှာပါ။ မပူပါနဲ့။
လုပ်ရဲရင် ခံရဲရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲဟာ။ ပြုခဲ့သမျှကို အတိုးအရင်းပေါင်းပြီး ဘ၀ အဆက်ဆက် ပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်။
Reply	ဦးတိုးတိုး February 22, 2013 - 8:13 am	ယခင်တစ်ခါကလည်း မှတ်ချက်ပေးဘူးပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၄၅ က တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ အပေါ်မှာသာ သက်ရောက်တာပါ။ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေမှာ မသက်ရောက်ပါဘူး။ အနိုင်အထက်ကျင့်တာ၊ အဂတိလိုက်စားတာတွေကို ဒီပုဒ်မနဲ့ အကာအကွယ်ပေးလို့ ပြုလို့ မရနိုင်ပါ။
Reply	ူlwinhtaytunwai February 22, 2013 - 9:04 am	လျှာအရိုးမရှိတိုင်းလျှောက်ပြေားနေတာ။နအဖလက်ထွက်တွေပါ။မမေ့ကြနဲ့အုံး။တိုင်လို့ရတယ်။ အရေးယူလို့မရဘူး။အရေးယူတဲ့သူသေလမ်းပဲရှိတယ်။ဘယ်သူကအမိုက်ခံပြီးလုပ်မှာလဲ။ စစ်တပ်ကကောင်တွေပဲနေရာအများကြီးယူထားတာ။တိုင်မယ်ဆိုရင်လဲနေရာတွေသေချာပြင် ဆင်ထားပြီးမှလုပ်ကြပါ။ခွေးဘီလူးစိတ်တွေမကုန်သေးဘူ။သန်းရွှေကအပိုင်လုပ်ထားပြီးသားပါ။
Reply	Shwe Hninsi February 22, 2013 - 10:49 am	It means the constitution was drafted just to protect the generals or ex-generals from prosecution then. The constitution is supposed to serve justice but actually it is serving the injustice. Whatafunny constitution! It isabig joke. Than Shwe had guilty conscience when he asked Thein Sein to draft 2008 constitution like this.
Reply	PNwara February 22, 2013 - 12:21 pm	ပြည်သူတို့ ၏ တိုင်ကြားစာနှင့် အသနားခံစာဆိုင်ရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ငြိမ်း-ပြောသောစကားများသည် ဆန္ဒပြမှူတွေ ယာယီရပ်ဆိုင်းသွားအောင်-ပရိယာယ်သုံးတာများလား- စဉ်းစားစရာဘဲ- အရေးယူဘို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါတွေမြင်လို့ လဲ နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခြင်းမရှိစေရ-လို့တိတိကျကျ ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့တာပေါ့- ဦးသန်းရွှေ ကို လွယ်လွယ်လေးလျော့တွက်လို့မရပါ-
ပါလီမာန်ထဲမှာ ကော်မီတီတွေ မှိုလိုပေါက်နေတယ်-တခြားအလုပ်မရှိတော့ဘူးထင်ပါ့-
Reply	Ghosts February 22, 2013 - 1:45 pm	The ghosts of the monks, students and ordinary citizens Than Shwe killed are haunting him everyday of his life. His own guilt is killing him and consuming him alive. Before he takes his last breath, I want to drag him along the streets of Yangon.
Reply	thihamin February 22, 2013 - 1:58 pm	ငွေကုန်-သံပြာဆိုပေမဲ့။ သမိုင်းဆိုတာက သွေးနဲ့ရေးခဲ့ရတာပါ။ မှင်နဲ့ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ကြောင်းဘဲလှည့်လှည့်၊ Forwardလို့ဆိုဆိုသူတို့(သန်းရွှေစစ်အုပ်စု)အပေါင်း အပါတွေအလှည့်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါကိုတော့ ယုံကြည်ထားစဲပါဘဲ။
Reply	angel February 22, 2013 - 3:53 pm	ဟုတ်ပါတယ်ရှေ့ဘဲသွားသွား နောက်ဘဲပြန်ပြန် မကြောက်ပါ။ သူတစ်ပါးကိုရက်စက်
Reply	The heavy curser. February 22, 2013 - 5:40 pm	These Monsters(Military Power crazy)must pays back their unfairness,robberies,killings,destruction,that every things,they did in this World,they will have to pay,even ,if, they died,their children,their families MUST pay back.That is in any Religion,sure.
Reply	Than Shwe February 23, 2013 - 1:54 am	You like me or not, I am as strong as Idi Amin from Uganda. We both are ugly and merciless. We killed, we raped, we cheated, we robbed, we lost everything later in life.
Reply	zaw February 23, 2013 - 11:11 am	I think after 1977/78 education year Dr NYI NYI (now in usa) changed regional college system and
Myanmar’s education was start downed, and after 1988, 3rd generation’ education was go to
floor compare with the world. Now we (students of Myanmar) start and try up from (-4) to get
good education. WHO DID AND KILL OUR HOPE AN EDUCATION?
Reply	a February 23, 2013 - 4:08 pm	ဒီလောက်ရှင်းနေအာင်မြင်တွေ့နေခဲ့ရတဲ့ဥပဒေမဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်မှပဲအရေးယူမှာလား။တိုင်တဲ့လူတွေကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးကြအုံးမှာလား။လိမ်စရာမရှိကိုယ့်အမြီးကိုယ်လိမ်နေကြတဲ့သူတွေပဲ။
Reply	ရဲရင်.ရန်ဝေ February 24, 2013 - 7:15 am	၂၀၀၂ ခုနှစ် ၊ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း များ မှ န.အ.ဖ နဲ.ပေါင်းပြီး ပြည်သူများရဲ. ငွေကြေး ၊
ဘုရားဂေါပက ငွေများ ၊ အသင်းအဖွဲ .ငွေများ ကျပ်သိန်းပေါင်း သိန်းချီတဲ.ငွေတွေကို ဒေ၀ါလီခံ
ဓါးပြတိုက် ယူခဲ.တာကို ဒီအချိန်မှာ ပြန်လည်အရေးယူဆောင်ရွက်သင်.ပါတယ် ၊ ထိုစဉ်က
ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတွေ (ဦး သန်းရွှေ ၊ ဦးမောင်အေး ၊ ဦးခင်ညွှန်.(S1) ၊ဦးဝင်းမြင်.(S3) ) တို.ဟာ
တစ်ဦးစီကို ကျပ်ငွေ သိန်းထောင်ချီရယူပြီး အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း များ ကို ကျပ်သိန်းပေါင်း သိန်းချီတဲ.ငွေတွေကို ပြည်သူများထံ NO REFUND လုပ်ဖို. ကူညီပေးခဲ.ပါတယ် ၊ ပြည်သူများရဲ. ငွေကြေး ၊
ဘုရားဂေါပက ငွေများ ၊ အသင်းအဖွဲ .ငွေများ ကျပ်သိန်းပေါင်း သိန်းချီတဲ.ငွေ ဓါးပြတိုက်ခံ
Reply	cho win February 25, 2013 - 11:02 am	than shwe becomesavallian because of the wickedness of the overseas politicians … daw su is justapuppet of american and now as u see who cares about burma? … no one !! daw dont say anything and not interested in rakhine and burma affairs cos now she is in hluttaw and obama even declares america not accepted the burmese refugees anymore cos he already got what he wanted… burmese refugees got into much trouble as before … brumese people still poor as like under than shwe … no one says anything …. people just care about their self …. it is justagame of competing to get the power ……. no true fairness … no true democracy……no true hope for burma … every one every where is selfish …. sometimes we miss than shwe … becos of himalot of people got the well paid jobs under UN or thousands of people can go to third countries and rich as much as junta high rank positions…. he earned for burma ..he gave the jobs to burmese ppl … who can deny ? maybe very few people been killed but millions times of people can go to third countries …. now they are very rich… than shwe changed their life … maybe than shwe isabad guy but notawicked man… even the politicians are much more wicked than than shwe … he did crazily handled the brumese affairs because of the wicked hoax of overseas witty politicians …..asapresident he needs to do somethings to make him powerful … now burma is more hopeless than the time under than shwe … who dare say burma is better than before …. ?
Reply	win then February 26, 2013 - 10:17 am	Do do whatever u want thein seine… now burma is like water in ur hands …. u give some little power to daw su and fullowers .. they like u and now daw su same side with junta cos she and followers likes power too … no real heroic manners ……. burma is hopeless …. i think than shwe is laughing hard behind the curtains … very hurt daw su can keep quiet foralittle bit of power … now we cant trust her anymore … same side with junta ….. Reply	minaung February 26, 2013 - 12:17 pm	junta is bad but ethnic groups also bad too… they pretend as if they are simple .. actually they are evil mind … they are so jealous,very low standard and they wanna destroy their same ethnic … actually they are worse than myanmar army … in myarnmar army ,, they are united .. for ethnic kachin karen chin shan groups they are ready to destroy and lie and cheat to everyone just forasmall amount of money and what they want … everyone should be alert …. they are great liers ,, cheaters and they are evils … i wanna say to myanmar people … dont think that kachin karen are honest and simple … they wanna kill burmese army … not just burmese army .. they are ready to destroy all burmese ppl … in their mind their ethnic is the greatest …… most powerful … study them very well or if u have the chance to close to them …. i dont say junta is good but kio or kia not just kio kia ….. they killedalot of burmese army officers brutally eg they cut burmese soldiers heads and drink brains .. that much no human minds …some killed all the burmese army group if it is not very big.. e.g. when the small army enter the village ,, they killed all and all the millitary group disappeared.. many times already … they shot the burmese army and disappear into the village and hid in the village .. whenalot of burmese soldiers been killed burmese army destroyed the village cos there is nth to find out who did that … they say they are united and all the enthnics hate burmese army.. even the women killed and had no human mind …. why burmese people think they are innocent ???????… actually they are not ,, they are evils …. all burmese people … take caution… dont believe them… i havealot of experience …. their characters really different from burmese people….ayan sate dat out tan kya tal … out tan sarr twe …. everything what they know how to be wicked cos they have no education …alot of of them are from prostitute houses even though they r now in third countries … they already lied to un and now they lying to un countries … whoever believe them got into great trouble .. same feathers flock together … people who re low minded or no brains will like them …. but their life cant be good and cant be rich … in life they cant achieve anything and they will lose everything later cos they have no morale and they only know how to be wicked and they try to lie and cheat all the time ….. their life is totally damaged and they try to damage other people life … stay away from them …. some are prostitutes , some have hiv , some have tb,, some are disabled … nothing good anymore … but shoundt be pitiful to them … they are like psychopatics …… i just post to let burmese ppl know about that …
Reply	minaung February 26, 2013 - 12:18 pm	junta is bad but ethnic groups also bad too… they pretend as if they are simple .. actually they are evil mind … they are so jealous,very low standard and they wanna destroy their same ethnic … actually they are worse than myanmar army … in myarnmar army ,, they are united .. for ethnic kachin karen chin shan groups they are ready to destroy and lie and cheat to everyone just forasmall amount of money and what they want … everyone should be alert …. they are great liers ,, cheaters and they are evils … i wanna say to myanmar people … dont think that kachin karen are honest and simple … they wanna kill burmese army … not just burmese army .. they are ready to destroy all burmese ppl … in their mind their ethnic is the greatest …… most powerful … study them very well or if u have the chance to close to them …. i dont say junta is good but kio or kia not just kio kia ….. they killedalot of burmese army officers brutally eg they cut burmese soldiers heads and drink brains .. that much no human minds …some killed all the burmese army group if it is not very big.. e.g. when the small army enter the village ,, they killed all and all the millitary group disappear… they shot the burmese army and disappear into the village and hid in the village .. whenalot of burmese soldiers been killed burmese army destroyed the village cos there is nth to find out who did that … they say they are united and all the enthnics hate burmese army.. even the women killed and had no human mind …. why burmese people think they are innocent ???????… actually they are not ,, they are evils …. all burmese people … take caution… dont believe them… i havealot of experience …. their characters really different from burmese people….ayan sate dat out tan kya tal … out tan sarr twe …. everything what they know how to be wicked cos they have no education …alot of of them are from prostitute houses even though they r now in third countries … they already lied to un and now they lying to un countries … whoever believe them got into great trouble .. same feathers flock together … people who re low minded or no brains will like them …. but their life cant be good and cant be rich … in life they cant achieve anything and they will lose everything later cos they have no morale and they only know how to be wicked and they try to lie and cheat all the time ….. their life is totally damaged and they try to damage other people life … stay away from them …. some are prostitutes , some have hiv , some have tb,, some are disabled … nothing good anymore … but shoundt be pitiful to them … they are like psychopatics …… i just post to let burmese ppl know about that …
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ကချင် ဒုက္ခသည် ကလေးများ ကျောင်းဆက်တက်ရန် ခက်ခဲနေ